IziCwangciso zeSifundo: Ukuthumela imiyalezo ngeSext-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Izicwangciso zesifundo sasimahla IziCwangciso zeSifundo: Ukuthumela imiyalezo ngeSelf
Izicwangciso zezifundo: ukuthumela imiyalezo ngefowuni ngefowuni
Inqaku elikhethekileyo lezifundo zeSiseko soMvuzo kukugxila ekusebenzeni kwengqondo yokufikisa. Oku kunceda abafundi ukuba baqonde kwaye bakhe ukuzomelela kwingozi enokubangelwa kukuthumela imiyalezo nemifanekiso yamanyala. Isiseko soMvuzo siye savunywa yiRoyal College of General Practitioners eLondon ukufundisa iindibano zocweyo zobuchwephesha kwimpembelelo yengqondo nakwimpilo yomzimba.
Izifundo zethu zihambelana neSebe leMfundo lakutshanje (urhulumente wase-UK) "Imfundo yobudlelwane, ubudlelwane kunye nemfundo yezesondo (RSE) kunye nemfundo yezempilo" isikhokelo esisemthethweni.
Zingasetyenziswa njengezifundo ezizimeleyo okanye kuseto lwesithathu. Isifundo ngasinye sineeseti zeSilayidi sePowerPoint kunye nesiKhokelo sikaTitshala kwaye, apho kufanelekileyo, iipakethe kunye nencwadi yomsebenzi. Izifundo ziza neevidiyo ezifakiwe, ii-hotlinks kuphando oluphambili kunye nezinye izixhobo ukuze kuphandwe ngokubhekele phaya ukwenza ukuba iiyunithi zifikeleleke, zisebenze kwaye zinokuzimela zinakho.
Intshayelelo malunga nokuThunyelwa imiyalezo ngemizobo engezantsi
Ukuthumelelana imiyalezo kunye nemifanekiso kunye ne-Intanethi
Ukuthumela imiyalezo ngefowuni, uMthetho kunye nawe **
** Iyafumaneka kubafundi baseNgilani naseWales ngokusekwe kwimithetho yaseNgilani naseWales; ikwafumaneka kubafundi baseScotland ngokusekwe kumthetho weScots.
Isifundo 1: Intshayelelo ngeSexting
Yintoni le nto yokuthumela imiyalezo nemifanekiso engamanyala? Abafundi bajonga ukuba kutheni abantu benokuthi bacele kwaye bathumele ii-selfie ezinganxibanga. Bathelekisa umngcipheko wokuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngamanyala. Isifundo sikwajonga indlela yokusebenzisa iphonografi ekuchaphazela ngayo ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala.
Inika ulwazi malunga nendlela yokuzikhusela kukuhlukunyezwa okungafunekiyo kunye nalapho unokufumana khona kwi-intanethi, izixhobo ezijolise kulutsha ukuze ufunde ngakumbi.
Abafundi bafunda ngendlela yokufumana imifanekiso yezesondo kubo kwi-intanethi.
Funda ngakumbi kwaye ukhuphele ngoku
Isifundo 2: Ukuthumela imiyalezo ye-Sexting, Iphonografi, kunye noBongo boButsha
Esi sifundo sijonga kumnandi, ubuchopho beplastiki kulutsha. Icacisa ukuba kutheni oososayensi bezinzwa bathi, "Kuzo zonke izinto ezenziwa kwi-intanethi, iphonografi inamandla okuba likhoboka". Ikuchaphazela njani ukuthumela imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni?
Abafundi bafunda malunga nendlela imisebenzi ye-intanethi efana ne-porn, imidiya yoluntu, umdlalo, ukugembula njl.njl.
Uninzi kangakanani iphonografi kakhulu? Yeyiphi imiba yempilo yengqondo nengokwasemzimbeni enokubangelwa? Unayiphi impembelelo ekufumaneni okanye kubudlelwane?
Abafundi bafunda ngendlela ingqondo enokufunda ngayo ukuzilawula, ukuzilawula kunye nokuba zeziphi iindlela zokunceda ukufezekisa oko. Bafumanisa malunga nezixhobo ukubanceda ukuba babe nolwazi kwaye bakwazi ukwenza ukhetho olufanelekileyo.
Isifundo 3: Ukuthumela imiyalezo ngefowuni, uMthetho kunye Nawe
Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni ayisiyoxesha elisemthethweni kodwa kunemiphumo yezomthetho. Akukho semthethweni ukuba abantwana benze, bathumele kwaye bafumane imifanekiso engamanyala yabantwana, nangaphandle kwemvume. Amapolisa ayithathela ingqalelo njengengxaki yokhuseleko. Ukuba umntu omncinci uxelwe emapoliseni ukuba uthumele imifanekiso engamanyala ngefowuni, inokuchaphazela amathuba emisebenzi kamva, nkqu nokuzithandela, ukuba kubandakanya ukusebenza nabantu abasesichengeni.
Sibonelela ngezicwangciso zezifundo ezibini apha (ngexabiso lenye), esinye sesezantsi kwaye esinye sesona siphakamileyo. Ngamnye kubo unezifundo ezahlukeneyo zamatyala ukubonisa amanqanaba okutshintsha. Ezi zifundo zisekwe kumatyala asemthethweni aphilayo kwaye abonisa iimeko eziqhelekileyo abafundi abanokuzifumana bekuzo.
I-Case Study Pack yootitshala inika uluhlu lweempendulo kunye neengcebiso zokunceda abafundi ukuba bacinge kwaye baxoxe ngezi meko zikhohlisayo ezifumaneka kwi-Case Study Pack yaBafundi. Bavumela abafundi ukuba baxoxe ngemicimbi kwindawo ekhuselekileyo kwaye bancede ukwakha ukomelela kokusetyenziswa ngaphandle kweklasi.
Umthetho ujongiwe yiNkonzo yoTshutshiso yeCrown eNgilane naseWales, yiOfisi yeCrown kunye neNkonzo yezeMali yeProcurator kunye ne-Scottish Children's Reporter Administration eScotland, ngamagosa asebupoliseni kunye namagqwetha.
Ukuthumela imiyalezo nge-Sext, uMthetho kunye nawe, eNgilane
Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni, uMthetho kunye nawe, eWales
Ukuthumela imiyalezo ngefowuni, umthetho kunye nawe, eScotland